Paradigm Shift: The “STRAW” Smuggler | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« “ထေရ၀ါဒရောက်ဖို့ မွတ်စလင်မ်က အသက်ပေးခဲ့ရတာပါ” (ဒေါက်တာမြင့်သိန်း – မြန်မာမွတ်စလင်မ်ကွန်ရက်)
‘The Elders’ urge Myanmar to address religious strife »
Another version. Want Greater Influence? Smuggle Donkeys By Alex Mandossian
တစ်ခါက နာရူဒင်ဆိုတဲ့ ခပ်ပြောင်ပြောင် လူတစ်ယောက် ရှိသတဲ့။ တစ်နေ့မှာ နာရူဒင်ဟာ ကောက်ရိုးထုံးတစ်ထုံး ကျောကုန်းပေါ်တင်ထားတဲ့ လားတစ်ကောင်ကို လက်ကဆွဲရင်း နယ်စပ်ဂိတ်တစ်ခုကို ၀င်လာတယ်။
အကောက်ခွန်အရာရှိက သူ့ကို မေးတာပေါ့။
“မင်း ဘယ်သူလဲ၊ ဘာအလုပ်လုပ်စားလဲ”
“ကျွန်တော်က ရိုးရိုးသားသား မှောင်ခိုကုန်ကူးစားသူပါခင်ဗျ”
“အေး၊ ဒါဆိုလည်း အဲဒီ့လားပေါ်က ကောက်ရိုးထုံးကို စစ်ဆေးရသေးတာပေါ့ကွာ၊ တစ်ခုခုများ ရှာတွေ့လို့ကတော့ မင်း အဖမ်းခံရပြီသာ မှတ်ပေတော့”
“သဘောရှိ ကရောဟိပါခင်ဗျာ၊ ကောက်ရိုးထုံးထဲမှာ ဘာမှ မပါပါဘူး”
အကောက်ခွန်အရာရှိက သူ့တပည့်တွေကို ကောက်ရိုးထုံးကို မွှေနှောက်လှန်လှောပြီး ရှာခိုင်းပါတယ်။ နာရူဒင်ပြောသလို ကောက်ရိုးထုံးထဲမှာ ဘာမှ မတွေ့ဘူး၊ ဒါနဲ့ မကျေမနပ်နဲ့ပဲ မှောင်ခိုကုန်သည် နာရူဒင်ကို နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ခွင့် ပေးလိုက်ရတယ်။
နောက်နေ့မှာလည်း လားပေါ် ကောက်ရိုးထုံးတင်ပြီ နာရူဒင် နယ်စပ်ဂိတ် ရောက်လာပြန်တယ်။ အကောက်ခွန်အရာရှိကလည်း “ဒီတစ်ခါတော့ သင်း ဘယ်ပြေးလွတ်မလဲ” ဆိုပြီး သူ့ကို သေသေချာချာ စစ်ဆေးတယ်တယ်။ ဒီတစ်ခါ ကောက်ရိုးထုံး တစ်ခုလုံးကို တစ်စမကျန် မြေလှန်ရှာရုံတင် မကဘူး၊ လားတစ်ကိုယ်လုံးရော၊ နဖားကြိုး၊ နဖားပေါက်တွေပါ မကျန် ပိုက်စိပ်တိုက် မွှေနှောက်ရှာတယ်။ ပြီး နာရူဒင်ရဲ့ ကိုယ်ပေါ်က အ၀တ်အစားတွေကိုလည်း ဟိုစမ်းဒီစမ်း ထောင့်စေ့အောင်စမ်းပြီး ရှာတယ်။ အဆုံးမတော့ ထုံးစံအတိုင်း ဘာမှ ရှာမတွေ့ဘူး။
ဒီလိုနဲ့ နာရူဒင်ဟာ ကောက်ရိုးတစ်ထုံး၊ လားတစ်ကောင်နဲ့ နယ်စပ်ဂိတ်ကို နေ့တိုင်း ဖြတ်တယ်၊ တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ သူ့ခန္ဓာကိုယ်မှာလည်း ၀တ်စားတန်ဆာတွေတောက်တောက်ပြောင်ပြောင် ဖြစ်လာတယ်။ နှစ်တွေအတော်ကြာ လို့ အကောင်ခွန်အရာရှိ သက်တမ်းစေ့သွားတဲ့အထိ သူ့ဆီက ဘာမှ ဖမ်းမမိလိုက်ဘူး။
အကောက်ခွန်အရာရှိမှာတော့ အငြိမ်းစားယူပြီးတာတောင် နာရူဒင်ဆီက ဘာမှောင်ခိုပစ္စည်းမှ ဖမ်းမမိလိုက်တာကြောင့် မကြေမချမ်း ဖြစ်နေတယ်၊
“ဒီကောင် တစ်ခုခု မှောင်ခို ခိုးထုတ်နေမှန်း သိသိကြီးနဲ့ ခံခဲ့ရတာ။ ငါကိုက အခဲ့တာပါ၊ လားပါးစပ်ထဲ သေချာဖြဲရှာခဲ့မိရင် ဒီကောင် သယ်လာတဲ့ပစ္စည်း ကွိခနဲ မိမှာပဲ” လို့ တွေးရင်း နောင်တရနေမိတယ်။
တစ်နေ့တော့ အငြိမ်းစားအကောင်ခွန်အရာရှိဟာ မြို့ထဲတစ်နေရာမှာ အမှတ်မထင် နာရူဒင်နဲ့ သွားတွေ့ပါတယ်။ သူက နာရူဒင်ကို မေးတယ်၊
“ဟေ့ကောင်၊ မင်းကိုငါ ကောင်းကောင်း မှတ်မိတာပေါ့၊ ကောက်ရိုးထုံးနဲ့ လားကို နေ့တိုင်း ဆွဲဆွဲသွားတဲ့ မှောင်ခိုသမား၊ ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား”
“ထားပါလေ၊ အခုတော့ ငါလည်း အငြိမ်းစား ယူပြီးပါပြီ၊ မင်းကို အရေးယူမှာလည်း မဟုတ်တော့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ငါစိတ်ထဲ အခုအချိန်ထိ မရိုးမရွ ဖြစ်နေတာတစ်ခု ရှိတယ်ကွ။ ပြောပြစမ်းပါ၊ ငါ ဘယ်သူ့ကိုမှ လျှောက်မပြောဘူး”
“ငါတာဝန်ကျတဲ့ကာလတစ်လျှောက် မင်း မှောင်ခိုထုတ်နေခဲ့တဲ့ ပစ္စည်းတွေက ဘာတွေလဲ”
နာရူဒင်က အေးအေးဆေးဆေး ပြန်ပြောပါတယ်။
“လားတွေလေဗျာ၊ တစ်နေ့တစ်ကောင် မှောင်ခိုထုတ်ခဲ့တာ”
ကောက်ရိုးထုံးပေါ်မှာချည်း ကိုယ့်အမြင်၊ ကိုယ့်အသိကို ချည်နှောင်ထားသမျှ ကောက်ရိုးထုံးအောက်က လားတစ်ကောင်လုံးကို လွတ်ထွက်သွားတတ်သည်တဲ့။
ပညာရှိသောသူတို့ကား ရောက်လာသောအခြေအနေ၊ ဖြစ်နေတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်၊ ရှင်သန်နေရတဲ့ဘ၀မှာ ကိုယ့်အမြင် ကိုယ့်အသိများအား ပြောင်းရွှေ့ယူရင်း အခြားမြင်ကွင်များကိုလည်း ကြည့်ရှုနိုင်၊ ဆင်ခြင်နိုင်၊ အသုံးပြုနိုင်ကြလေကုန်၏တဲ့။
အမြင်များ ပြောင်းရွှေ့ခြင်းကို Paradigm Shift ဟု ခေါ်သည်။
Kyaw Ba Thit ထံမှ ထပ်ဆင့်မျှဝေပါသည်
Tags: Animals, Arrest, Donkey, Far East, Health, Middle East, Smuggling, United States
This entry was posted on September 26, 2013 at 11:35 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.